मोती र अन्य चमत्कार हातमा द्वारा को काठ यिन-यांग
तपाईं दोकान Windows, जो मोती को, सुन्दर उज्यालो र असामान्य वस्तुहरू कसरी अक्सर हेर्नुहुन्छ? तिनीहरूले उत्पादन कि तिनीहरूलाई वास्तविक विजार्डहरू थिए त सिद्ध हुन थाल्छ। तथापि, बुनाई मोती वास्तवमा गाह्रो छैन, आफ्नो मास्टर कुनै पनि लगनशील भई लागिरहेमा जानुहुन्न, र सबै माथि, एक व्यक्ति को सौन्दर्य लागि प्रयास। फूल मोती, को रूखहरू सुन्दर vases, कंगन, आदि - .. यो सबै हात द्वारा गर्न सकिन्छ।
मोती को Scythian र Sarmatian समय देखि आभूषण को निर्माण को लागि सामाग्री रूपमा सेवा गरे। यसलाई देखि आभूषण उत्पादन मात्र होइन, तर पनि लुगा र जुत्ता तिनीहरूलाई कढाई। र हामी, मोती आविष्कार वास्तवमा, Phoenicians - आफ्नो व्यापारीहरू मौका द्वारा (यति लिजेन्ड भन्छन्) ग्लास उत्पादन तरिका फेला कि। को glassmaking केही समय पछि यस्तो मोती र bugles को निर्माण रूपमा उद्योग देखा परे।
शब्द अरबी "मनका" कृत्रिम मोती हो। यसको पहिलो नमूनाहरू एकदम ठूलो र अपारदर्शी थिए, तर प्रविधिहरू विनिर्माण हाम्रो समय मा मोती मोती पनि सानो आकार, स्पष्ट र अविश्वसनीय विभिन्न रङ उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
मनका विनिर्माण रूखहरू
वस्त्र सजाउनु र कंगन, हार र कान को बाली सिर्जना गर्न, तर पनि आफ्नो घर सजाउनु गर्न मात्र प्रयोग हाम्रो समय needlewoman माला मा। मनका अचम्मको सौन्दर्य प्यानल, फूल, रूख र फ्रेम बनेको छ। यस लेखमा हामी मोती को काठ यिन-यांग र मोती देखि सुन्तलाको रूख जस्ता उदाहरण मा मोती देखि रूखहरू उत्पादन कुरा हुनेछ।
विभिन्न रङ, आकार र आकार - मोती को रूखहरू को निर्माण को लागि तपाईं सबै मोती को पहिलो गर्न आवश्यक हुनेछ। पनि विभिन्न paillettes, टेप, धागो, मोती, तार, बालुवा, ढुङ्गा र यति मा। एन स्टक shears गर्न नबिर्सनुहोला।
बुनाई मोती अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण बिन्दु धैर्य छ। यो पहिलो पटक हुन जो सक्छ काम को एक टुक्रा ठीक, छ। तथापि, निराश र हरेस काम छैन यो लायक छ - तपाईं बिस्तारै "nabete 'हात र तपाईं वास्तविक masterpieces प्राप्त गर्नेछन्!
मोती को काठ यिन-यांग
त्यसैले, नाम implies रूपमा, रूख मोती को यिन-यांग - दुई विपरीत सिद्धान्त संयोजन, कि मुख्यतया रंग मा प्रकट भएको छ। तसर्थ, रूख को यिन-यांग लागि कालो र सेतो मोती पकाउन गर्न आवश्यक छ।
तार लगभग 7-8 मोती सफेद तार पाश पाउन र कस गर्नुपर्छ। एउटै तार, यी "लूपहरूको" को सात मा उत्पादन, र त्यसपछि आधा र मोड मा गुना। अर्को तपाईं मात्रा दिन विभिन्न निर्देशनहरू तिनीहरूलाई खोल्दै शाखा, अर्थात् को रूप मा लूपहरूको राख्न आवश्यक छ। एउटै दुई शाखा को निर्माण पछि, र सोही स्पिन जडित हुनुपर्छ। सबै नै आवश्यकता गरेका र कालो मोती संग गर्न।
तपाईंको रूख यिन-यांग मोती रसीला गरिएका को लागि, प्रत्येक रंग को लगभग 20 तीन शाखा आवश्यक हुनेछ।
अर्को, तपाईं मोटा तार को टुक्रा लिन र एउटै रंग को शाखा को प्रत्येक जोडी मा स्क्रूड गर्न आवश्यक छ। (- .. काला टेप, र सेतो - सेतो अर्थात् कालो) र यो लक यस्तो शाखा (एक चौथाई बारेमा) प्रत्येक माथिल्लो भाग एक रिबन अनुरूप रंग हावा आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं एक ट्रंक सबै सेतो शाखा, र सबै कालो मोड आवश्यक - अन्य मा। पनि टेप - तार को बाँकी खुला भाग माटोले को रंग, र माथि ढाक्न आवश्यक छ।
र अन्तिम चरण - दुई अक्सर intertwined छन्, एक पट (जो, प्रसंगवश पनि मोती को गर्न सकिन्छ) मा सेट र सबै - को मोती को काठ यिन-यांग तयार छ!
सुन्तलाको रूख मनका
उत्पादन सुन्तलाको रूख, लगभग 80 मिमी को एक तार लम्बाइ लिन। यसको बीचमा आवश्यकता मा सुन्तला मोती र3साना हरियो मोती strung गर्न। तार को एक अन्त फिर्ता मनका मार्फत पिरोया छ। त्यसपछि मोती7stringing र लुपमा तिनीहरूलाई कस तार को अन्य अन्त मा,2थप यस्तो लूपहरूको त्यसपछि के। फेरि तार को Torsion, स्क्राच बाट सम्पूर्ण सञ्चालन दोहोर्याउनुहोस्। यसरी हामी एक twig सिर्जना, जो मा केहि "सुन्ताला" र पात छन्। एउटै तरिकामा मात्र पात हुन र सुन्ताला संग शाखा तिनीहरूलाई बाँध हुनेछ जो केही हाँगाहरू, छन्।
अर्को, तपाईं एक पिरामिड को रूप मा प्राप्त twigs सङ्कलन गर्न, र तार सँगै मोड आवश्यक छ। twigs गर्नाले तपाईं रूख कुनै पनि फारम दिन सक्छन्। पछिल्लो चरण - र्याप रिबन स्टेम र "बिरूवा" एक पट मा एक रूख।
Tunics crochet: योजना र वर्णन (महिलाहरु को लागि)। गर्मी openwork crochet अंगरखा
म पूर्वाग्रह बाध्यकारी मा सिलाई को लागि एक खुट्टा चाहिन्छ?
ढाँचा दुई सुई मा Sledkov। क्षेत्रीय वर्णन, चयन ढाँचा
मोडेल जलयात्रा जहाज काठ बनेको
सामाग्री र उपकरण: आफ्नै हातले सानो कुरा को लागि बक्स
Kokoshnik पूर्व। हिम पूर्व लागि कसरी kokoshnik गर्छन्
रिबको फ्रिज: लक्षण र उपचार
एउटा अचम्मको नुस्खा: बैंक Skewer
औषधि "gramicidin": प्रयोगको लागि निर्देशन
चकलेट बिस्कुट केक नुस्खा 'शाही'
आफ्नो खुट्टा मा दुखाइ हिड्ने गर्दा: कारण, लोक उपचार को उपचार
कसरी मशरूमको साथ स्वादिष्ट मशरूम सूप पकाउनुहोस्
समतल स्लेट र यसको आवेदन